Wiil uu adeer u yahay Abwaan Hadraawi oo lagu diley Koonfur Afrika – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wiil Soomaali ah xalay lagu diley magaalada Cape Town ee dalkaasi gaar ahaan Xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Phiphly sida ay sheegeen dad goob goobiyaal ah.
Wiilka la diley ayaa magaciisa lagu soo koobay Walanwal waxaana la sheegay in uu adeer u ahaa Abwaanka weyn ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Warsame ( Hadraawi).
“Xalay ayaa la diley saaka ayaa meydkiisa la arkay ma garan karno cida ka dabeysay dilkiisa” waxaa sidaasi sheegay gabar kamid ah dadka deegaanka.
Jaalliyadda Soomaaliyeed eek u dhaqan wadaka Koonfur Afrika ayaa waxaa ay yihiin kuwo dhibaato dhan kasta leh kala kulma kooxo abaabulan oo Koonfur Afrikaan ah kuwaas oo dil. dhac iyo handadaad joogto ah ku haya dadla Soomaaliyeed eek u nool dalkaasi.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxey diyaar u tahay in la dardargeliyo wadahadalada lagula jiro Somaliland